Truth Post Nepal | लकडाउन सहनु भनेको हरेकले मृत्युवरण गर्नु हो - Truth Post Nepal लकडाउन सहनु भनेको हरेकले मृत्युवरण गर्नु हो - Truth Post Nepal
लकडाउन सहनु भनेको हरेकले मृत्युवरण गर्नु हो
(बिनोद त्रिपाठी) सरकारले फेरि जनतालाई गुमराहमा पार्न खोजिरहेको छ । लकडाउनको ७० दिनको मोडालिटी ल्याएर सरकारले सारा जनतालाई आँखामा छारो हाल्दैछ । अब यसका विरुद्ध सबै विरोधमा नउत्रने हो भने सरकारले कोरोना भाइरसका विरामी देखिएसम्म कुनै न कुनै रुपको लकडाउनकै आधारमा बर्षौंसम्म लकडाउन लगाइरहन्छ । त्यतिबेलासम्म कोरोनाले होइन, सारा तहसनहस, मृत्यु र विनास वाहेक केहि हुने छैन । सबैले एकपटक सोचौं ।
दुनियाँमा कुनै देशले ७० दिनसम्म लकडाउन लगाउने मोडालिटी ल्याएको छ ? यो हदैसम्मको निरंकुश शैली अपनाएर जनतालाई गुमराहमा पारेको हामीले नचेत्ने हो भने हरेक जनता विबिध कारणले मर्न र मृत्युको मुखमा पुग्ने निश्चित छ । सरकार किन लकडाउन लब्याउन चाहन्छ ?
१, कोरोना भाइरस नियन्त्रणका नाममा १० अर्ब खर्च भएको छ । तर, यो खर्च बास्तविक कोरोना पीडितलाई एक सुको खर्च भएको छैन । यसको सोधखोज र अनुशन्धान रोक्न सरकार लकडाउन लगाइरहन चाहन्छ ।
२, लकडाउन खुल्ने वित्तिकै सत्तारुढ दल भित्र मडारिएको मतभेद तुरुन्त सतहमा आउनेछ । यसले सरकार फेरबदलको काम हुनेछ । यसलाई रोक्न सरकार लकडाउन लगाइरहन चाहन्छ ।
३, वालुवाटार जग्गा प्रकरण, गोकुल वास्कोटा घुस प्रकरण, एमसिसी लगायतका आयोजना, विभिन्न अनियमीतताका घटनाका मुद्धा लकडाउनका कारण स्थगित छन् । लकडाउन खुल्ने वित्तिकै यी सारा मुद्धा अघि बढ्ने निश्चित छ । यी सबैलाई रोक्न सरकार लकडाउन लगाइरहन चाहन्छ ।
४, संसारमा यति लामो र यस्तो प्रकृतिको कडा लकडाउन कुनै देशमा छैन । जुन देशमा हजारौं मानिस मरिरहेका छन्, त्यहाँ लकडाउन पुरै खोलिसकेका छन् । किनकी, लकडाउनले कोरोना भाइरस नियन्त्रण नहुने स्पष्ट भइसकेको सबै देशहरुले बुझिसकेका छन् । यो भाइरस सय बर्ष बढि रहन्छ । यसैले, लकडाउन पुरै खारेज गर्न विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्वका विभिन्न आर्थिक फोरमहरु लगायतले सबै देशलाई अनुरोध गरिसकेका छन् । तर, नेपाल सरकारले आँफुलाई टिकाइरहन लकडाउन लगाइरहन चाहन्छ ।
५, इश्वर पोखरेललाई अघिल्लो पटक आपुर्तिमन्त्री हुँदा ट्यांकी भित्र करोडौं रकम लुकाएको आरोप लागेको थियो । उनै पोखरेललाई अहिले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संयोजक वनाईएको छ । यो समितिले पोखरेलकै नेतृत्वमा १० अर्ब खाइसकेको छ । यो दोहनलाई निरन्तरता दिन सरकार लकडाउन लगाइरहन चाहन्छ ।
६, भारतले रातीको समय वाहेक करिब सबै प्रकारका लकडाउन हटाउन थालेको छ । विश्वमा कोरोना भाइरसले दैनिक लाखौं संक्रमित र हजारौं मृत्यु हुँदा पनि हरेक देशले यसको नियन्त्रण लकडाउन होइन, भन्ने घोषणा गरिसकेका छन् । नेपाल सरकारले भने लकडाउनलाई सरकार जोगाउने अस्त्र वनाएर लकडाउन लगाइरहन चाहन्छ ।
७, सरकारले जनताको सुरक्षाका लागि लकडाउन लगाएको कोहि कसैलाई भ्रम छ भने त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस पहिला । लकडाउन त एक बहाना हो । यसका उदाहरणका लागि हरेक भेडीगोठ जस्ता मृत्युका अखडा क्वारेन्टाइन हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । नेपालमा क्वारेन्टाइनमा मानिसको मृत्यु भइरहेको छ । यो संसारमा कहिं छैन । यस्ता हर्कतलाई निरन्तरता दिएर देश दोहन गर्न सरकार लकडाउन लगाइरहन चाहन्छ ।
८, सरकारको कामप्रति प्रमुख विपक्षी दल सहित अन्य राजनीति पार्टीहरु भ्रममा छन् । सबै दललाई सरकारले कोरोना भाइरसबाट जोगाउन लकडाउन लगाएको गलत रिपोर्ट गरेको छ । अन्य दलहरु यहि भ्रममा छन् । अब नागरिक तहले स्वतस्फुर्त विरोध नगर्ने हो भने माथि उल्लेखित देश दोहन, अनियमीतता, भ्रष्टाचार र जनतालाई कष्ट दिन सरकार लकडाउन लगाइरहन चाहन्छ ।
अतः संसारमा कहिं नभएको लकडाउनको ७० दिने मोडालिटी ल्याएर सरकारले जनतालाई मार्न खोजिरहेको छ । यस्तो अपराधपुर्ण निर्णयका विरुद्ध आजैबाट हरेक नागरिक शशक्त विरोधमा उत्रनुको विकल्प छैन । नत्र भने सरकारले कोरोना भाइरसका संक्रमित देखिएसम्म लकडाउन लगाइरहन्छ । न यो भाइरस कहिल्यै हराउनेछ , न सरकारले सत्ता छोड्नेछ । अहिले नै लकडाउन विरुद्ध नउत्रने हो भने संसार उज्यालोतिर रमाइरहँदा हामी अन्धकार भित्र रोइरहेका हुनेछौं । आजैदेखि सारा जनता लकडाउन विरुद्ध लागौं । लकडाउन सहनु भनेको हरेकले मृत्युवरण गर्नु हो ।
मदिरा निद्राको साथी होइन्
कसरी अन्त्य होला कोरोना महामारी?